संखुवासभा सामूहिक ह’ त्या : जब मृ’तकको मोबाइलमा नयाँ सिम सक्रिय भयो ! – Online Khabar 24
संखुवासभा सामूहिक ह’ त्या : जब मृ’तकको मोबाइलमा नयाँ सिम सक्रिय भयो !
संखुवासभाको मादी नगरपालिका-१ मा एकै परिवारका ६ जना मारिएको एक सातापछि प्रहरीले लोकबहादुर कार्कीलाई प’क्रा’उ गरेर सार्वजनिक गर्‍यो ।
मान’सिक सम’स्याको औषधि सेवन गरिरहेको दाबी सहित प्रहरीले मृ’ तक तेजबहादुरले हेप्ने गरेका कारण घ’टना भएको बतायो ।
एक अनुस’न्धान अधिकृतका अनुसार हत्या भएको भोलिपल्ट मृ’तकका सामानहरु रुजु गर्ने क्रममा मृ’तक रञ्जनाको दुईवटा मोबाइल भेटिएको थिएन ।
‘घ’टनाको तीन दिनपछि सुर्के थैलीमा राखिएको सादा मोबाइल घर बाहिर झु’ण्डाइएको अवस्थामा भेटियो,’ एक अधिकृत भन्छन्, ‘तर ओप्पो ब्राण्डको अर्को फोन भेटिइरहेको थिएन ।’ अन्य पाटोबाट अनुस’न्धान भइरहेका बेला मोबाइलको विषय ओझेलमै थियो ।
केही दिनपछि लोक बहादुरले कसूर स्वी’कार्दा मोबाइल खोजीमा प्र’हरीले त्यति ध्यान पनि दिएन । उनलाई सार्वजनिक गरेपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र प्रदेश प्र’हरी कार्यालय, विराटनगरको टोली फर्कियो । त्यसपछि बल्ल इ’लाका प्रहरी कार्यालय, खाँदबारीले मोबाइलको खोजी गर्न थाल्यो ।
सीआई’बीले पनि मोबाइलबारे प्रा’विधिक छा’नबिन थाल्यो । अनुस’न्धान अधिकृतहरुका अनुसार सामूहिक ह’ त्या भएकै दिन २१ भदौको दिन बिहान ५ः४४ बजे मोबाइल स्वीच अफ भएको प्राविधिक विश्लेषणबाट देखियो ।
‘ह’ त्या पनि त्यही समय आसपास भएको फ’रे’क जाँचले देखाएको थियो,’ एक अधिकृत भन्छन्, ‘मोबाइल अफ हुनु र हत्याको समय मिल्नु संयोग मात्र मान्न सकिन्नथ्यो ।’उनको भनाइमा मोबाइल ब’न्द हुनुमा कि चार्ज सकिएको हुनुपर्थ्यो कि अर्कोले लगेर अफ गरिदिएको हुनुपर्थ्यो ।
हि’सतमा रहेका लोकबहादुरले मोबाइलबारे थाहा नभएको बताइरहेका थिए । यस्तो अवस्थामा अन्य व्यक्ति पनि घट’नामा जोडिनसक्ने अनुमान अधिकृतहरुको थियो ।
मोबाइल सक्रिय भएपछि… प्रह’रीले रञ्जनाले मोबाइलमा प्रयोग गरेको सिमकार्डमार्फत आईएमईआई नम्बर ट्रेस गरिरहेको थियो । अन्य पाटोबाट पनि खोजी भइरहेकै थियो ।प्राविधिक विश्लेषण गरिरहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले २९ भदौमा ह”राएको मोबाइलमा नयाँ नम्बर सक्रिय देखिएको सूचना टेलिकमबाट पायो ।
मोबाइलमा सक्रिय ९८२९३४… नम्बरको विवरण मगाउँदा प’क्रा’उ परेका लोकबहादुरका बुबा रणबहादुर कार्कीको नाममा सिम दर्ता भएको देखियो । प्रहरीलाई सिम कसले चला’इरहेको छ भन्ने पुष्टि गर्न थप आधार पनि चाहिएको थियो ।
सिमको कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) नि’काल्दा दुईवटा नम्बरमा भएको फोन शं’का’स्पद देखियो । अनुस’न्धानमा सं’लग्न अधिकृतका अनुसार ९८१०४७ … मा ७ पटक सम्पर्क भएको थियो भने ९८४२३४… नम्बरमा ३ पटक कुराकानी भएको थियो ।
स्रोतका अनुसार पहिलो नम्बर हिरा’सतमा रहेका लोकबहादुरकै थियो । त्यसपछि प्र’हरी अधिकृतले त्यो नम्बर हिरा’सतमा रहेका लोकबहादुरको मोबाइलमा डायल गरेर हेरे, ‘कान्छो भाइ’ भनेर सेभ गरेको देखियो ।
अर्को नम्बर चाहिं ‘मादी दिदी’ नाममा सेभ गरिएको थियो । प्रह’रीका अनुसार विवाह गरेर मादी गएकी लोकबहादुरकी दिदीलाई पनि प्रहरीले सोधपुछ गर्‍यो । त्यस क्रममा बुबाको नाममा भएको सिमकार्ड कान्छो भाइ नरेश कार्कीले चलाउने गरेको देखियो ।
‘त्यसपछि नै उनलाई नियन्त्र’णमा लिएर अनुसन्धान गर्‍यौं,’ अनुसन्धा’नमा सं’लग्न एक अधिकृत भन्छन्, ‘उनले केही समय घरमुनिको ओडारमा मोबाइल लुकाएका रहेछन्, लोकबहादुर प’क्रा’उ परेपछि मोबाइल चलाउन थालेछन् ।’
नरेशलाई प्रहरीले ३१ भदौमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, संखु’वासभा लग्यो । त्यहाँ लिइएको बयानमा उनले लोकबहादुरले ह’ त्या गरेको आफूले देखेको तर संलग्न नरहेको दाबी गरे । अनुसन्धानमा खटिएका एक अधिकृत भन्छन्, ‘उसले ह’ त्या गरेको पछिपछि बसेर सबै देखेको र मोबाइल चाहिं लोभ लागेर आफूले राखेको भनेको थियो ।’
प्रहरीका अनुसार उनले दिएको बयानमा कतिपय विषयहरु बाझि’इरहेका थिए । ‘पछि घ’टना काका खड्ग बहादुरका छोराहरुले पनि देखेको उनले खुस्काए,’ प्रहरी स्रोत भन्छ, ‘त्यसपछि छोराहरुलाई ल्याएर सोधपुछ गर्दा खड्गबहादुर सहित छोरा हस्तबहादुर, तेजबहादुरका भाइ रणबहादुर र दुई छोरा लोकबहादुर र नरेशको सं’लग्नता खुलेको हो ।’
Prevसं’क्रमणले रोजगारी गुमाएका गरिबलाई १० हजार !
nextमेवाका यति धेरै गुण छन् तर तपाईले कहिले खानु भएको थियो मेवा ?